Haimen Xinrong Electric Co., Ltd ike na 1999, a ọkachamara emeputa pụrụ iche na nnyocha, mmepe na mmepụta nke oven oriọna njide . Anyị na-dị na Liuhao Town, Haimen City, nso Shanghai n'ọdụ ụgbọ mmiri, na-adaba adaba njem ohere. All nke anyị na-soro mba àgwà ụkpụrụ na na-ekele dị ukwuu maka dị iche iche na ahịa n'ụwa nile.
Anyị na-enye iche iche iche iche nke oven oriọna njide, anyị oven bọlbụ njide-na-eji maka gas oven, dị ọcha uzuoku oven, uzuoku oven, oven ọkụ fixtures. Ngwaahịa na-tumadi exported na Italy, Turkey, na Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara na anyị magburu onwe ya mma, preferential price, obi dum maka anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị ahịa ọrụ!
Ọ bụla na-arụ ọrụ na anyị ụlọ ọrụ na-eje ozi ọ bụla ahịa n'ụwa na ụkpụrụ: obi ụtọ na-eje ozi bụ na tupu; quality ọchịchị bụ isi nke development; aha bụ isi nke ndụ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị na ngwaahịa, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla na anyị ga-zaghachi ị dị ka anya dị ka o kwere.
Ọ bụrụ na i nwere mmasị na ihe ọ bụla nke anyị na ngwaahịa ma ọ bụ ga-achọ na-atụle a ahaziri iji, biko chere free ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya guzosie ike nke ọma ahịa mmekọrịta ọhụrụ ahịa niile gburugburu ụwa.